Miyaad raadineysaa ereyga "dabiici ah" cunnooyinka aad soo iibsatid? Maalmahan, qaar badan ayaa sameeya. Baahida Macaamiisha ayaa ku riixeysa tafaariiqleyaasha inay alaab fara badan oo "dabiici ah" ku dhigaan khaanadaha dukaamadooda.
Alaabada mar kaliya laga heli jiray bakhaarada cuntada caafimaadka ama dukaamada tafaariiqda gaarka ah (sida Suuqa Beerooyinka Sprouts, Cunnooyinka Cuntada oo dhan ama Qudaarta dabiiciga ah) ayaa hadda laga heli karaa suuqyada waaweyn.
Astaanta dabiiciga ahi waxay kor u qaaddaa iibka
Erayadu waxay saameyn xoog leh ku yeeshaan akhlaaqda. Kaliya maahan in macaamiisha ay aad ugu dhowdahay inay iibsadaan badeecad leh astaan ​​“dabiici ah”, waxay sidoo kale u leeyihiin badeecadan noocyo badan oo dabeecado dheeraad ah. IFIC waxay weydiisay macaamiisha muxuu yahay aragtidooda, ay aad ugu dhowdahay inay faa iido weyn uhelaan caafimaadkooda: shey leh calaamad "dhamaan dabiici" ama shey isku mid ah oo aan lahayn astaamo? Waxaa la yaab leh, 70% macaamiisha la wareystay waxay doorteen jawaabta koowaad.
Way fududahay in la fahmo sababta ay macaamiisha u maleeyaan in dhammaan alaabada dabiiciga ahi ay caafimaad qabaan. Maalin kasta waxaan aragnaa wararka ku saabsan sunta cayayaanka ee cuntadeena iyo biyo wasakhaysan oo biyo ah. Waxaan ku hareereysan nahay kiimikooyin iyo alaabooyin aad loo warshadeeyay (oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo farshaxanimo iyo farsameysan leh). Waxaan ka walaacsanahay caafimaadka iyo badbaadada carruurteenna waxaanna dooneynaa inaan wax uun ka beddelno xaaladdan. Ka takhalusida maaddooyinka macmalka ah iyo waxyaabaha ilaaliya walxaha firfircoon iyo midabka ayaa u muuqda dadka qaarkood hab wanaagsan oo lagu bilaabo.
Tags: waxyaabaha dabiiciga ahSahanka Dadweynahakoritaanka iibka
Uzbekistan ayaa qorshaynaysa inay kordhiso goosashada baradho boqolkiiba 60%
Suuqa loogu talagalay khudaarta gasacadeysan ee Ruushka waxaa saameyn ku yeeshay baahinta baahsan iyo tartan lala galo soosaarayaasha shisheeye
AGROSALON 2020 waxaa lagu qaban doonaa taariikhihii hore loo cayimay
Soosaarayaasha Nizhny Novgorod waxay awoodi doonaan inay noqdaan kuwa iibiya suuqyada waaweyn ee qadka internetka